Discovery Academy dia miresaka momba ny fanontaniana rehetra momba ny fanaovana herisetra amin'ny zatovo mety tsy noeritreretinao hapetraka
Home » Serivisy fampandrenesana tariby » Discovery Academy dia miresaka momba ny fanontaniana rehetra momba ny fanaovana herisetra amin'ny zatovo mety tsy noeritreretinao hapetraka
Andraikitry ny olon-dehibe ny manampy ny tanora hamolavola ny karazana tontolo honenany. Afaka manampy ny Discovery Academy.
Raha mijery azy amin'ny fandrosoana ianao, ny fampijaliana dia paikady ahazoana miditra amin'ny loharano. "
- Dieter Wolke
PROVO, UT, US, 29 Janoary 2021 /EINPresswire.com/ - Ho an'ny olona sasany, rehefa tena maneso na milalao dia miampita ilay izy fampijaliana sarotra faritana. Na izany aza, ny fahasamihafana misy eo amin'ny fihomehezana sy ny fanararaotana dia tsotra. Lahatsoratra iray vao haingana nataon'ny Discovery Academy no namaritra ireo fetra ireo ary mamaly fanontaniana manan-danja hafa momba ny herisetra ataon'ny tanora.
Maninona ny tanora no mampijaly ny hafa?
Maro amin'ireo lasibatry ny mpampijaly no manome tsiny ny tenany. Heverin'izy ireo fa hadin'izy ireo ny mampijaly olona hafa azy ireo. Na izany aza, ny antony mampijaly matetika dia mifandraika amin'ilay mpampijaly fa tsy lasibatra. Betsaka ny antony ara-psikolojika sy ara-batana mahatonga ny fihetsika mahery setra. Rehefa azonao bebe kokoa ny momba ny herisetra dia ho azonao tsara kokoa ny fomba fampijanonana azy.
Inona avy ireo antony ara-psikolojika amin'ny fanararaotana?
Ny sampan-draharaha amerikanina misahana ny fahasalamana sy ny serivisy mahaolona dia nanadihady ny antony mahatonga ny fihetsika mahery setra. Hitan'izy ireo fa tsy misy antony iray. Antony maro samihafa no mahatonga ny mpampijaly. Antony iraisana na antony mampidi-doza amin'ny fampijaliana no misy:
· Ny olona mora tezitra na tezitra dia mety ho tonga mpampijaly.
· Raha saro-piaro amin'ny fahombiazana na mahasarika tanora hafa ny zatovo iray, dia mety ho lasa mpanao herisetra ilay zatovo.
· Mety hampijaly ny hafa ny tanora raha mahita ny tenany ho ambony noho ny hafa.
· Ny tanora notezaina ka mino fa ratsy ny mampiavaka azy dia mety hampijaly olona hafa izay hitany fa tsy mitovy.
Inona avy ireo antony ara-batana amin'ny fanararaotana?
Raha ny filazan'ny mpikaroka psikology Dieter Wolke, dia misy antony evolisiona hanaovana herisetra.
“Raha mijery azy miandalana ianao dia paikady hahazoana fidirana amin'ny loharano. Ary mihamatanjaka eo amin'ny fahatanorana izany satria loharano hafa, ohatra, ny fifandraisana amin'ny olona tsy mitovy fananahana », hoy i Wolke.
Misy ihany koa ny antony isam-batan'olona. Matetika ny fanaovana herisetra dia eo amin'ny fahatanorana. Mbola mivoatra ny ati-dohan'ny tanora. Ny kort prefrontal ao amin'ny ati-doha dia mifehy ny antony. Izy io koa dia iray amin'ireo faritra farany ati-doha mamorona. Raha ny marina, ny fahaizan'ny tanora misaina dia mbola mitombo. Noho izany dia mirona amin'ny fanapahan-kevitra miorina amin'ny fihetsem-po izy ireo.
Na dia misy antony ara-psikolojika sy ara-batana aza ny fanaovana habibiana, tsy midika izany fa azo avela ny fialan-tsiny hatrany. Raha miahiahy ianao fa mampijaly ny hafa ny zanakao lahy na lasibatry ny fampijaliana dia midira. Amin'ny maha ray aman-dreny anao dia manana ny fahaizana manova ny fiainan'ny tanora ianao. Manana ny fahaizana manampy amin'ny famoronana tontolo tsara fanahy sy salama koa ianao.
Rahoviana ny milalao manodidina no miampita ny herisetra ara-batana?
Ny fampijaliana ara-batana no endrika miharihary indrindra amin'ny fanararaotana. Tafiditra amin'izany ny famelezana totohondry, fikapohana, fandakana na fanimbana ny kendrena, na fanimbana ny fananan'ny lasibatra. Na dia tokony ho miharihary aza ny fanaovana herisetra ara-batana, ny olona sasany dia mandray ny fiheverana fa mahatafiditra ankizy izany, amin'ny maha-zaza azy fotsiny.
Saingy, manao herisetra izany raha:
· Ilay olona mitovy lasibatra hatrany.
· Ilay mpampijaly na vondron'olona mpampijaly dia manandrana mandratra, manala baraka na mampitahotra ilay niharan-doza.
· Misy tsy fifandanjan-kery, toy ny hoe matanjaka noho ny niharam-boina ilay mpampijaly na manana toerana ambony ara-tsosialy.
Rahoviana no lasa mpanao herisetra am-bava ny fihomehezana?
Toy ny fanararaotana ara-batana, rehefa lasibatra imbetsaka ilay olona miaraka amin'ny fikasana hanisy ratsy, ny fanarabiana dia mamadika ny tsipika fampijaliana. Ny fanaovana herisetra am-bava dia mety hiteraka fahavoazana maharitra amin'ireo olona kendrena na natao mivantana taminy na natao momba azy ireo ao ambadik'izy ireo.
Inona no atao hoe fanararaotana ara-pientanam-po?
Ny fampijaliana ara-pihetseham-po dia mbola misimisy kokoa noho ny fampijaliana am-bava. Ny fanaovana herisetra ara-pientanam-po dia mitranga rehefa misy olona na vondron'olona mikendry ny hahatonga ny olona iray hahatsapa ho tsy azo antoka, mitokantokana na tsy milamin-tsaina. Na dia mbola misy aza ny olona tsy mandray ny herisetra ara-pientanam-po, dia raharaha lehibe io. Ny fampijaliana ara-pientanam-po dia mety hiteraka famoizam-po na hanosika ilay olona hieritreritra na hanandrana hamono tena mihitsy.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny filalaovana fitia sy ny fanararaotana ara-nofo?
Ao amin'ny The bully, the bullied, and the not-in-pain bystander, Barbara Coloroso (2015) dia mamaritra ny fahasamihafana misy eo amin'ny fanesoana sy ny fanesoana, ary koa ny filokana sy ny fanaovana an-keriny amin'ny resaka firaisana ara-nofo. Nolazainy fa ny filalaovana fitia:
· Fampisehoana faniriana tsy natao hanimba.
· Avelao ireo olona voarohirohy hifanakalo andraikitra mora foana.
· Natao hampanintona ilay olona iray hafa nefa mbola voafehiny.
· Mijanona raha tezitra ilay olona iray hafa, zavatra, na tsy liana.
Araka ny lazain'i Coloroso, fanaovana an-keriny ara-nofo:
· Miandany amin'ny ankilany.
· Mitohy aorian'ny tanjona kendrena.
· Miorina amin'ny tsy fifandanjan-kery.
· Natao hanimba na hanararaotana ilay olona iray hafa.
Ny fanararaotana ara-nofo dia tsy fanasana amin'ny fiainana romantika na firaisana. Fanafihana izany.
Inona no atao hoe Cyberbullying?
Amin'izao andro izao, ny tanora dia tsy mila miahiahy fotsiny hoe hampijalina any an-tsekoly na rehefa mivoaka ny trano. Ny bullying dia azo atao ao an-tranony avy amin'ny Internet. Ireo endrika fampijaliana rehetra voalaza eto amin'ity lahatsoratra ity afa-tsy ny fanararaotana ara-batana dia azo atao amin'ny Internet. Tafiditra ao anatin'izany ny fanorisorenana mivantana ny lasibatra na fanaparitahana hevitra manimba momba ilay lasibatra ao ambadik'izy ireo na hafatra ara-nofo tsy ilaina.
Rehefa misy zavatra miampita ny tsipika avy amin'ny fanesoana ho amin'ny fanaovana habibiana dia tsy sarotra ny mahita azy. Diniho izay ilaina amin'ny fahasalaman'ny tanjona ary mihetsika mifanaraka amin'izany.
jereo http://www.discoveryacademy.com/ ho an'ny antsipiriany momba ny fomba hanampiana ny zanakao manahirana na hiantso ny departemantan'ny fidiran'ny sekoly ambony Discovery Academy ao amin'ny 855-645-0480 hamandrika hevitra maimaimpoana.
Mpitondra tenin'ny Akademian'ny Discovery
+ 1 801-361-6600
Mpitondra tenin'ny Akademian'ny Discovery, serasera nomerika Rainboost
29 Janoary 2021, 00:00 GMT